မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ပတ်သက်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအပေါ် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ ငွေကြေးဒဏ်ခတ်မှု(၄) | ဒီရေ
မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ပတ်သက်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအပေါ် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ ငွေကြေးဒဏ်ခတ်မှု(၄)
၄၀၂။ ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်နိုင်သိန်း (ဝန်ကြီး Commerce ဇနီး ဒေါ်အေးအေး)
၄၀၃။ ဒေါ်မြသိင်္ဂီ(ဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်သိန်းဆွေ၏ဇနီး)
၄၀၄။ ဒေါ်ခင်လေးသက် (ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်း ၏ဇနီး)
၄၀၅။ ဗိုလ်မှူချုပ်လွန်းသီ (ဝန်ကြီး စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌါန၊ ဇနီး ဒေါ်ခင် မာအေး၊ သား ဦးဇင်မောင်လွန်း၊ သမီး မြစိမ်းအေး
၄၀၆။ ဒေါ်မိုးသီတာ (ဗိုလ်မှူးချုပ်ဖုန်းဇော်ဟန် ၏ဇနီး)
၄၀၇။ ဒေါ်မြသီတာ (ဒု-ဝန်ကြီးပါမောက္ခဒေါက်တာမြဦး၏ဇနီး)
၄၀၈။ ဦးသီဟ (ဒါရိုက်တာ -ထူးထရေးဒင်း- အစိုးရ၏အကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ -လန်ဒန်စီးကရက်ဖြန့်ဝေသူ တဦးတည်းကိုယ်စားလှယ် (မြဝတီ ထရေးဒင်း) ဦးတေဇ၏အစ်ကို၊ ဇနီး ဒေါ်ရွှေရွှေလင်း)
၄၀၉။ ဦးကျော်သီဟ (ဗိုလ်ချုပ်အုန်းမြင့် ၏သား၊ ဇနီး ဒေါ်နွယ်အိအိဇင်)
၄၁၀။ ဦးဇေသီဟ (ဦးခင်ရွှေ (အစိုးရ၏အကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ) ၏သား၊ ဇနီး ဒေါ်နန္ဒာလှိုင်)
၄၁၁။ ဒေါ်ခင်သီရိ (ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇင်ယော် ၏ဇနီး)
၄၁၂။ ဦးကျော်သူ (ဒု-ဝန်ကြီး ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌါန ၊ ဇနီး ဒေါ်လဲ့လဲ့ကြည်)
၄၁၅။ ဒေါက်တာမြသူဇာ (ဒု-ဝန်ကြီးပါမောက္ခဒေါက်တာမြဦး၏သမီး)
၄၁၇။ ဗိုလ်ချုပ်ညွှန့်တင် (အငြိမ်းစား) အစိုးရ၏အကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ- ဇနီး ဒေါ်ခင်မျိုးဦး၊ သား ဦးကျော်မျိုးညွှန့်၊ သမီး သူသူအိဟန်)
၄၁၉။ ဒေါ်မာလာတင့် (ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်သန်း ၏ဇနီး)
၄၂၀။ ဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးတင့် (ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးဝန်ကြီးဌါန)
၄၂၁။ ဦးအောင်တိုး (တရားသူကြီးချုပ်- အစိုးရ၏အကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ)
၄၂၂။ ဦးကြင်တိုး (ဦးဋ္ဌေးမြင့်၏အစ်ကို- အစိုးရ၏အကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ)
၄၂၃။ ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ထွန်း (ဒု-ဝန်ကြီး-စီးပွါးရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌါန )
၄၂၅။ ဒေါ်ချိုချိုထွန်း (ဒု-ဝန်ကြီး ဦးဖေသန်း၏ဇနီး)
၄၂၆။ ဗိုလ်ချုပ်လှထွန်း (ဝန်ကြီး Finance and Revenue- ဇနီး ဒေါ်ခင်သန်းဝင်း)
၄၂၇။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်း (ဇနီး ဒေါ်ခင်မေလတ်)
၄၂၈။ ဒေါ်မီမီထွန်း (ဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်စောထွန်း၏သမီး-ဦးမောင်မောင်လွင်၏ဇနီး)
၄၂၉။ ဦးနေဝင်းထွန်း (CEO - ပတ္တမြားနဂါး ကျောက်စိမ်းနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာ ကုမ္ပဏီ- အစိုးရ၏အကျိုး စီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ)
၄၃၀။ ဥာဏ်ထွန်း Commodore (Senior Military Officer (Navy)- Chief of Staff (Navy). Board member UMEHL -ဇနီး ဒေါ်ခင်အေးမြင့်)
၄၃၁။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ညီထွန်း ( ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့)
၄၃၂။ ဗိုလ်မှူးကြီးဥာဏ်ထွန်း(ရေ) (ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်- ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွါးရေးဦးပိုင် လီမိတက်)
၄၃၃။ ဒေါ်ဥမ္မာကျော်ထွန်း (ဦးဝေဖြိုးအောင် (ဗိုလ်မှူးချုပ်ဝေလွင် ၏သား)၏ဇနီး)
၄၃၄။ ဒေါက်တာစိုင်းဆမ်ထွန်း (လွယ်ဟိန်းကုမ္ပဏီ-စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဌါနနဲ့ အကျိုးတူပူးပေါင်းလုပ် ကိုင်နေခြင်း- အစိုးရ၏အကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ)
၄၃၅။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဆန်းထွန်း ( ဇနီး ဒေါ်တင်စိန်)
၄၃၆။ ဗိုလ်ချုပ်စောထွန်း (ဝန်ကြီး- ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဇနီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ကို၊ သမီး ဒေါ်မီမီထွန်း)
၄၃၈။ ဗိုလ်ချုပ်သိန်းထွန်း (Senior Military Officer- Director of Signals. Member of National Convention Convening Management Committee)
၄၃၉။ ဗိုလ်ချုပ်သိန်းထွန်း (ဒု-ဝန်ကြီး စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌါန)
၄၄၀။ ဗိုလ်ချုပ်တင်ထွန်း (ဇနီး ဒေါ်ခင်မြင့်ဝေ)
၄၄၁။ ဒေါ်ခင်နှင်းဝေ (ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ထွေး ၏ဇနီး)
၄၄၂။ ဒေါ်ခင်မြင့်ဝေ (ဗိုလ်ချုပ်တင်ထွန်း ၏ဇနီး)
၄၄၃။ ဒေါ်မာမာဝေ (ဗိုလ်ချုပ်လှဋ္ဌေးဝင်း ၏ ဇနီး)
၄၄၄။ ဒေါ်မိမိဝေ (ဒု-ဝန်ကြီး၊ ဒု-ဗိုလ်မှူကြီးခင်မောင်ကျော်၏ ဇနီး)
၄၄၅။ ဒေါ်ညွှန့်ညွှန့်ဝေ (ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်း ၏ဇနီး)
၄၄၆။ ဒေါ်စန်းစန်းဝေ (ဒု-ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဘုန်းဆွေ ၏ဇနီး)
၄၄၈။ ဒေါ်ဝေဝေ (ဒု-ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဥာဏ်ထွန်းအောင်၏ဇနီး)
၄၄၉။ ဒေါ်သက်ဝါ (ဒု-ဝန်ကြီးအုန်းမြင့်၏ဇနီး)
၄၅၀။ ဦးမောင်ဝိတ်(မောင်ဝိတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်- စိုးရ၏အကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ)
၄၅၁။ ဦးအောင်ကိုဝင်း (ဆရာကျောင်း) (ကမ္ဘောဇဘဏ်နှင့် မြန်မာဘီလီယံအုပ်စု ကုမ္ပဏီ,နီလာရိုးမ ကုမ္ပဏီလီမိတက်, အရှေ့ရိုးမကုမ္ပဏီနှင့် ဇနီး ဒေါ်နန်းသန်းထွေး၊ သမီး ဒေါ်နန်းလန်းခမ်း၊ တူ-ဦးဇော်ဝင်းနိုင်)
၄၅၄။ ဗိုလ်ချုပ်လှဋ္ဌေးဝင်း (ဇနီး ဒေါ်မာမာဝေ)
၄၅၅။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ထိန်ဝင်း (တိုက်ကြီးမြို့အပိုင်)
၄၅၆။ ဗိုလ်ကြီးထွန်းဇော်ဝင်း (ဇနီး ဒေါ်ဝတ်ရည်ဦး(ဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်၏သမီး))
၄၅၈။ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း (ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးသိန်းစိန် ၏ဇနီး)
၄၆၀။ ဒေါက်တာခင်မြဝင်း (ဒု-ဝန်ကြီးမောင်မြင့်၏ဇနီး)
၄၆၁။ ဒေါ်ခင်ပြုံးဝင်း (ဗိုလ်ချုပ်ခင်ဇော် ၏ဇနီး)
၄၆၂။ ဒေါ်ခင်သန်းဝင်း (ဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်လှထွန်း၏ဇနီး)
၄၆၄။ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဝင်း (ဇနီး ဒေါ်စန်းစန်းရီ၊ သားများ-ဦးညီညီအောင်၊ ဦးမင်းနေကျော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဘုန်းမြင့်ထွန်း)
၄၆၅။ ဦးကျော်ဝင်း (ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီလိမိတက် (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌါနအောက်ရှိ သထုံတာယာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူ) - အစိုးရ၏အကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ - ဇနီး ဒေါ်နန်းမောက်လောဝ်ဆိုင်)
၄၆၆။ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်း (ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်-ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွါးရေးဦးပိုင်လီမိတက်)
၄၆၇။ ဗိုလ်ချုပ်ကြည်ဝင်း (ဇနီး ဒေါ်ခင်မြမွန်)
၄၆၈။ ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း (ဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆန်း၏ ဇနီး)
၄၆၉။ ဒေါ်ကြူကြူဝင်း (ဝန်ကြီးဦးစိုးသာ၏ဇနီး)
၄၇၀။ ဦးမင်းနေကျော်ဝင်း (ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဝင်း ၏သား)
၄၇၁။ ဒေါ်မူမူဝင်း (ဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်သိန်းဇော် ၏ဇနီး)
၄၇၃။ ဗိုလ်ချုပ်မြဝင်း (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌါန)
၄၇၅။ ဒေါ်မြမြဝင်း (ဒု-ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သိန်းထွန်း၏ဇနီး)
၄၇၆။ ဗိုလ်မှူးချုပ်နေဝင်း (ဇနီး ဒေါ်နန်းအေးမြ)
၄၇၈။ ဒေါ်နီနီဝင်း (ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ဋ္ဌေးဦး၏ဇနီး)
၄၇၉။ ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း (ဗိုလ်ချုပ်သန်းဋ္ဌေး ၏ဇနီး)
၄၈၀။ ဦးဥာဏ်ဝင်း (ဝန်ကြီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌါန - ဇနီး ဒေါ်မြင့်မြင့်စိုး)
၄၈၁။ ဒေါ်စန်းစပါယ်ဝင်း (ဒေါက်တာဘုန်းမြင့်ထွန်း(ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဝင်း၏သား)၏ဇနီး)
၄၈၂။ ဒေါ်စန်းသီတာဝင်း (ဦးညီညီအောင်(ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဝင်း ၏သား) ၏ဇနီး)
၄၈၅။ ဒေါ်သီတာဝင်း (ဒု-ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးသိန်းဆွေ၏ဇနီး)
၄၈၇။ ဦးဇော်ဝင်း (ဇနီး ဒေါ်နွယ်နီစန်း)
၄၈၈။ ရဲမှူးချုပ် ဇော်ဝင်း
၄၉၀။ ဗိုလ်မှူးဇော်ဖြိုးဝင်း (တာဝန်ကျ ဒါရိုက်တာ-ပြည်ပပို့ကုန်ဌါန-ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌါန - ဇနီး ဒေါ်သန္တာရွှေ (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ၏သမီး))
၄၉၁။ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးနေဝင်း (ဌါနဆိုင်ရာ -မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ -မြဝတီ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး)
၄၉၂။ ဒေါ်လွင်ယမင်း (ဗိုလ်မှူးချုပ်ဝေလွင် ၏သမီး)
၄၉၃။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇင်ယော် ( ဇနီး ဒေါ်ခင်သီရိ)
၄၉၄။ ဒေါ်မြင့်မြင့်ရီ (ဒေါ်ရီရီမြင့်) (ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်သူရအောင်ကို ၏ဇနီး)
၄၉၅။ ဒေါ်နုနုရီ (ဗိုလ်မှူးကြီးမြင့်အောင် ၏ဇနီး)
၄၉၆။ ဒေါ်စန်းစန်းရီ (ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဝင်း ၏ဇနီး)
၄၉၇။ ဒေါ်စန်းစန်းရီ (စူပါဝမ်း ကုမ္ပဏီအုပ်စု- အစိုးရ၏အကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ )
၄၉၈။ ဒေါ်စန်းစန်းရီ (ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်အေး ၏ဇနီး)
၄၉၉။ ဒေါ်ထွေးရီ (ဒေါ်ထွေးထွေးရီ) (ဗိုလ်ချုပ်အောင်သိန်း ၏ဇနီး)
၅၀၀။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ရီ (ဇနီး ဒေါ်ခင်မေစိုး)
၅၀၁။ ဒေါ်ခင်ခင်ရီ (ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်း၏ဇနီး)
၅၀၂။ ဒေါ်စိုးဝတ်ရည် (ဒု-ဝန်ကြီးဗိုလ်ှူးချုပ်သန်းဋ္ဌေး၏ဇနီး)
၅၀၃။ ဦးပြည့်ဖြိုးတေဇ (ဦးတေဇ(အစိုးရ၏အကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ )၏သား)
၅၀၄။ ဦးတေဇ ( မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ထူးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ထူးဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ- အစိုးရ၏အကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ - ဇနီး ဒေါ်သီတာဇော်၊ သား ဦးပြည့်ဖြိုးတေဇ၊ အစ်ကို ဦးသီဟ၊ အဖေ ဦးမြင့်ဆွေ၊ အမေ ဒေါ်အုန်း)
၅၀၆။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ဇော် (ဇနီး -ဒေါ်ခင်ပြုံးဝင်း၊ သား ဦးကြည်သာခင်ဇော်၊ သမီး ဆုခင်ဇော်)
၅၀၇။ ဦးကြည်သာခင်ဇော် (ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်ဇော-၏သား)
၅၀၈။ ဒေါ်ဆုခင်ဇော် (ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်ဇော- ၏သမီး)
၅၀၉။ ဗိုလ်မှူးချုပ်သိန်းဇော် (ဝန်ကြီး -ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန -ဇနီး ဒေါ်မူမူဝင်း)
၅၁၀။ ဒေါ်သီတာဇော် (ဦးတေဇ (အစိုးရ၏အကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ )-၏ဇနီး၊ အဖေ ဦးဇော်ညွှန့် (ကွယ်လွန်)၊ အမေ ဒေါ်ထူး(ကွယ်လွန်)၏သမီး
၅၁၁။ ဗိုလ်မှူးကြီးသူရိန်ဇော် (ဒု-ဝန်ကြီး အမျိုးသားစီးပွါးတိုးတက်ရေးနှင့် နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌါန ၊ ဇနီး-ဒေါ်တင်အုန်းမြင့်)
၅၁၂။ ဦးရီဘုန်းဇော် (ဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်၏သား)
၅၁၃။ ဦးဇော်ဇော် (မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ-မက်စ်မြန်မာကုမ္ပဏီလီမီတက် -ဇနီး ဒေါ်ဋ္ဌေးဋ္ဌေးခိုင်)
၅၁၄။ ဒေါ်နွယ်အိအိဇင် (ဦးကျော်သီဟ (ဗိုလ်ချုပ်အုန်းမြင့် (အစိုးရ၏အကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင် ရွက်ပေး နေသူ) ၏သား)
၅၁၅။ ဗိုလ်မှူးကြီးသန့်ဇင် (အငြိမ်းစား) (Managing Director at Myanmar Land and Development )